Madaxweyne Caan ah Oo Dhaqaale Badan Ku Bixiya Qurxinta Jirkiisa.
August 27, 2017 - Written by Kulmiye
Madaxweynaha Dalka Faransiiska Emmanuel Macron , ayaa dhaqaale aad u badan ku bixiya qurxinta jirkiisa, waxaana arintan si weyn u hadal haya Warbaahinta dalka Faransiiska oo siyaabo kala duwan uga hadlay.
Emmanuel Macron ayaa an bishii May ee sanadkan 2017 waxa uu qurxinta jirkiisa ku qarash gareeyay lacag dhan 26,000 oo yuuro, waxaana dhaqaalahan ina badan qaadanayay dad u qaabilsan Madaxwenaha dhinaca qurxinta .
Wargayska Le Point ee ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa qoray in lacag aad u badan ku baxdo Qurxina Madaxwenaha Faransiiska gaar ahaan qurxina jirkiisa iyo waliba wajiga, waxaana qurxinta u xil saaran dad ku xeel dheer dhinaca qurxinta.
War kasoo baxay Aqalka Madaxtooyada dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in ay jiraan qarashaad ku baxa qurxinta Madaxweynaha balse aysan dhameyn tirada lacagta la sheegay, wakaalada France Info ayaa ku warantay in lacagta hada ku baxdo qurxinta Macron ay wax badan ka yartahay tii ku bixi jirtay Madaxdii ka horeesay.
Nin gacan yare u ah Madaxwenaha Faransiiska ayaa sheegay in ay ka shaqeyn doonaan sidii loo yareyn lahaa qarashka badan ee ku baxa qurxinta Madaxweynaha dalka Faransiiska ah oo nin dhalinyaro ah kana mid ah Madaxda ugu da’da yar caalamka.